Imemori kwiintlanzi | Ngeentlanzi
Ukutyhubela iminyaka kuye kwavela intsomi ebubuxoki apho kukholelwa ukuba iintlanzi zinenkumbulo embi, kodwa enyanisweni akunjalo, izifundo ezahlukeneyo zibonisa okwahlukileyo. Namhlanje siza kubhekisa kuphando lwase-Australia apho kwaqatshelwa ukuba iintlanzi zineenkumbulo ezintle.
Phantse kwishumi elinesiqingatha, uphando lwenziwe kufundo kunye nenkumbulo yabantwana. intlanzi. Ukusuka kwiYunivesithi yaseCharles Sturt (Australia) ingcali ekuziphatheni kwezi zintsholongwane ibhengeza izigqibo ezahlukeneyo.
Iintlanzi ezininzi zinesakhono esikhulu sokukhumbula amarhamncwa azo de kube malunga nonyaka emva kokuba zihlaselwe. Umzekelo, ikhaphethi esele iluma ikhonkco iyakhumbula amava kwaye iyabaphepha abo bathatha ubunzima iinyanga ezininzi.
Kutshanje kwenziwe ulingelo ngeentlobo ezahlukeneyo zamanzi acocekileyo, eziye zahlalutywa kwindalo yazo emva koko zangena echibini, zibonelela ngokutya kwiindawo ezahlukeneyo nokubabeka kumarhamncwa ukuba bajonge ukuhamba kwabo.
Ngale ndlela, kwaqinisekiswa ukuba iintlanzi zinememori yexesha elide, ukongeza ekufundeni ukwazi indawo yazo enzulu kwaye zidibanisa intabalala yokutya okanye iingozi ezifumaneka kwiindawo ezithile.
Ulwazi abaluqokelelayo lusetyenziselwa ukuphepha izisongelo kunye nokulandela iindlela zakho ozithandayo.
«Ukuba indlela eziziphethe ngayo ayaziwa, unokwenza impazamo yokukholelwa ukuba xa kungekho kulotywa kungenxa yokuba izixhobo ziphelile okanye iintlanzi zimkile, xa enyanisweni, into enokwenzeka kukuba zikhona, kodwa abasayi kuwela emgibeni»Abaphandi bathi.
Iinkcukacha ezithe xaxe - I-Clown yeentlanzi ziyakhwaza
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » I-Aquarium yetropiki » Intlanzi enememori elungileyo